"Red Steppe" ụdị ụmụ ehi 🐻: àgwà, àgwà nke na-eto eto, ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na nchịkwa ọrịa, foto na vidiyo - Ugbo - 2019
Ọ bụrụ na iche iche nke ugbo bụ Mmiri ara ehi, Nhọrọ maka nhazi na ịzụlite Red Steppe ụdị ehi bụ ihe ngwọta bara uru ma dị irè.
Ogologo oge, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 200 nke ahụmahụ na ịzụlite na ọrụ zootechnical na ìgwè na-akwado nke a.
Ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na igbochi ọrịa
Ihe atụ maka ozuzu
Akụkọ banyere Red Steppe ụdị
Ala nna nna - mpaghara ndịda nke Ukraine. Ihe e kere eke nke ehi a na-aṅụ mmiri ara ehi mere ebe kachasị site na ịmịkọrọ mmiri na ịmị mkpụrụ nke na-eme ka sọlfọ Ukraine dị na ya dịka Angeln, Ostfryzlyandskoy, ụdị nke Wilstermarch.
Ebe ọ bụ na 70s nke XIX narị afọ. n'ihi usoro mwepụ nke ndị bi na ya, ìgwè nke ehi uhie na-acha uhie uhie na-acha ọbara ọbara nke si na obe gafee oke osimiri Oké Osimiri Osimiri Black na Kuban, mpaghara Stavropol, Kalmykia, mpaghara Volga, ebe ọdịda anyanwụ Siberia.
N'ebe ohuru uzo ohuru di, enwere uzo na umu umu anu ulo, nke ndi nke ohuru na umu umu di iche iche biara.
N'ikpeazụ, e mepụtara ụdị ehi ehi gosipụtara n'ụzọ zuru oke ka ọnọdụ ọnọdụ ihu igwe nke steppe na ụkọ nri na-enweghị isi.
Njirimara ndị a na-ejikọta na ụdị ndị a na-ahụ.:
edo edo na-acha uhie uhie-acha odo odo na agba uhie-acha uhie uhie (ma o nwere ike ịbụ na akara ọcha na udara, isi, obi);
akwara adịghị ike;
compact body structure length 150 - 165 cm;
obi miri - ruo 70 cm, ọkara n'obosara - 45 - 47 cm;
elu akara dị larịị;
udiri bụ ọkara, nnukwu efere ma ọ bụ bat;
uto bu ihe di nma, ma obughi ihe ozo;
Ụdị na ntọala nke aka ahụ bụ eziokwu.
Ihe okike nke ehi bu ezigbo:
na-ebu ụzọ na-ebugharị mgbe ọ dị afọ 28 ruo 29;
ọmụmụ dị elu;
oge nkedo ihe dịka ụbọchị 380;
na nri kwesịrị ekwesị ma zuo oke, ụmụ ehi site na ọnwa isii ruru ogo 160-170 nke ịdị arọ ndụ.
Nkezi ibu arọ nwa anụmanụ toro eto bụ 800 - 900 kg maka sire; 450 - 550 kg maka ehi. Ihe arụ ọrụ maka oge agụmakwụkwọ bụ ihe dị ka puku lita 3.5-4 na mmiri ara ehi na ọdịnaya nke anụ ahụ dị 3.5-3.7%.
Kwa afọ kwa mkpụrụ ehi nke nwere oge akara nke 305 ụbọchị si na 340 ruo 400 kilogram ma dabere na afọ nke anụ ahụ, ọnụọgụ anụ, àgwà nri, na ọnọdụ njide.
E nwekwara ụdị mmiri ozuzo ndị ọzọ mmiri ara ehi, dika: Jersey, Simmental, Aishir.
Na mgbakwunye na mmiri ara ehi dị mma dị mma a na-akpọ nkume:
ezi mgbanwe maka ihe ihu igwe na ihu igwe;
enweghị nchegbu maka ọnọdụ ejidere;
n'oge mmiri ozuzo ọkọchị, ehi abụghị naanị na-ejigidesi ike, ma na-enye ya ọbụna na saline pasures.
Iji adịghị ike Ụdị gụnyere:
emekarị mastitis na cows mmiri ara ehi n'oge igwe milking n'ihi na ugboro ugboro na-ezute oge ụfọdụ nke dum oda ma ọ bụ òkè;
mmerụ ahụ nke aka na-adabere na ahụ ike na-adịghị ike mgbe ị na-ata nri na ala ịta ahịhịa na-enweghị atụ;
adịghị ike nke ihe owuwu ahụ: nsogbu na nkwụghachi azụ;
Ihe ụfọdụ na-ekwu banyere adịghị ike nke ntakịrị ihe dị arọ nke ụmụ anụmanụ, ma otu nwere ike ikwenye na nke a, ebe ọ bụ na a na-ebute ya n'ọnọdụ mbụ dị ka mmiri ara ehi.
Foto "Red Steppe" ehi ehi:
Nnukwu mmezi Njirimara ezighi ezi na-ezere ihe isi ike na nnukwu ihe onwunwe na-akwụ ụgwọ na-elekọta ma na-elekọta ụmụ anụmanụ. N'oge ọkọchị, ihe oriri na nri kachasị mma na-enye nri bụ ebe ịta nri.
Oge ahịhịa ndụ na-enwe mmetụta bara uru na ọnọdụ anụ ahụ na arụpụtaghị ụmụ anụmanụ. Na mpaghara ebe okpomọkụ na-ekpo ọkụ n'oge niile, n'agbanyeghị eziokwu na oke ehi na-acha ọbara ọbara, ọ ga-adị mma ịhazi ndò na ebe ịta nri.
Dị mkpa zere inyefe ihe karịrị 2-2.5 kilomita site n'ugbo nke ebe ịta nri: ụgwọ ike na-akwụ kwa kilomita nke ikpo ahụ yiri nhazi 1 n'arọ nke mmiri ara ehi.
Maka ezigbo lactation, mmiri ọṅụṅụ kwesịrị ịdị ọcha, dị ọhụrụ ma buru ibu.
Ebe dị ọkụ, nke na-egbuke egbuke, ụlọ akọrọ na-enweghị ihe ngwọta na okpomọkụ nke 10 - 12 ° C bụ nhọrọ kachasị mma maka ịchekwa ehi ke ini etuep.
Maka kwa ụbọchị, ma ọ bụghị oge oyi oyi na okpomọkụ dị n'okpuru -15 Celsius C, na-eje ije na ịchọrọ inwe obere mpaghara. Ịgba uwe na-eme ka mmiri na ịsa mmiri na ebe ndị emerụrụ emerụ.
Dị ka ụdị ụmụ anụmanụ ndị ọzọ, mkpa maka nri na-acha uhie uhie uhie na-adabere na ọnọdụ ahụike. N'ozuzu, isi nri nri oyi bụ hay.
Ma, nyere ihe dị mfe ụmụ anụmanụ nke ụdị a n'ihe gbasara nri, otu ụzọ n'ụzọ atọ nwere ike iji dochie anya ya.
N'oge oyi, ụdị akwụkwọ nri akwụkwọ nri ga-aghọ akụkụ dị oké mkpa nke nri.
Ọ bụrụ na agbakwunye nri gourds na ndepụta isi, ọ ka mma ịkị ha.
Silage dịka naanị isi iyi nri bụ ihe na-adịghị mma: ọ nwere ike ime ka a mụọ nwa ehi.
Dị mkpa. Ikwesighi itinye nri ma o bu ahihia na nri nri ka o wee zere isi mmiri ara ehi nke edoziri ya.
Iji zere mmebi nke ike nrụrụ na ahụ na vitamin deficiencies, ụmụ anụmanụ kwesịrị ịnata premixes - na-agbakwunye na mgbakwunye na nke vitamin-ịnweta components, ma ọ bụ multivitamin mgbagwoju anya. Mkpụrụ vitamin dị mkpa karịsịa:
Aịchịkwa ọrụ nke iku ume, digestive, urinary;
D, na-eme ka ọkpụkpụ na mgbochi nke rickets na ụmụ ehi;
Eeme ka ọtụtụ usoro metabolic dị mkpa.
Iji chefuo ezughị sodium na ihe oriri osisi, e kwesịrị inye ụmụ anụmanụ nnu.
Osisi uzo uhie di ndu na-eguzogide ozo n'abughi nani ihe ndi mmadu siri ike, ma dika ufodu oria, ka ihe atu, okuku umenakwa ka arịa ọrịa kansa ọbaranke na-akpata ịmegbu na igbu nke ụmụ anụmanụ na-arịa ọrịa.
N'agbanyeghị iwu siri ike na ntachi obi nke ehi ndị a, ịgba ọgwụ mgbochi megide ọrịa ndị ọzọ bụ isi nke anụ ụlọ bụ ihe a chọrọ n'aka:
ụkwụ na ọrịa ọnụ;
Ihe nchedo megide akọrọ na ọdịda ọdịda na-adabere na ọnọdụ ahụ: ọdịdị capsules na ọdịda ọdịda dị n'azụ ụmụ anụmanụ, ọnụnọ nke akọrọ na ịta nri.
N'iji ọgwụ nje ọrịa na eriri afọ, a na-emezi ehi oge ogenakwa dị ka achọrọ.
Dị ka o kwesịrị ịdị, ọchịchọ nke imeziwanye arụmọrụ nke ụdị ọ bụla. Ndị na-emepụta ihe na-acha uhie uhie ka ha na-ejide ihe ndị dị elu ma na-enwe ntachi obi na-achọpụta ihe kachasị mma:
Ihe mgbaru ọsọ bụ ịnọgide na:
akwa mmiri ara ehi na ezi anglers;
otutu ihe ndi ozo na ndi ozo di na Danish;
àgwà ka mma nke oda, na-adị ndụ dị arọ na ohere nke elu ga-esi na golshtinok pụta.
Ogologo ikike nkwalite nke ụdị ekwesiri iburu n'uche nke oma dika ihe di mma maka oru ulo oru na mpaghara ndi ozo na-ekpo ọkụ.
Enweghị nkwenye maka ọnọdụ ejidere apụtaghị ịda ogbenye na enweghị aha nri na nke a. Nlekọta anụzi nke ọma, nzaghachi dị mma ha na-enye nri ka mma ga-agba mbọ hụ na a na-enweta mmiri ara ehi na mmiri dị mma.
Banyere ehi na enwere ọtụtụ ozi ndị ọzọ a pụrụ ịchọta na weebụsaịtị anyị:
Kedu otu esi amalite ehi ehi maka umu anu dika ahia?
Ebu ndi siri ike na umuaka si na England - "Hereford".
Otutu nduku Dutch ozuzu Impala
Esi esi kwadebe tomato maka oyi, anyi na-amuta uzo
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Mkpebi magburu onwe ya maka ugbo - Umu uzo nke ehi